Hutano, 14 Ndira 2021
China 14 Ndira 2021
Svo Muv Chip Chit Chin Chis Mug
Vanhu zana nemakumi mashanu nevasere kana kuti 158 vafa nechirwere cheCovid-19 mukati memazuva manomwe adarika zvichitevera kufa kwevamwe vanhu makumi matatu nevasere kana kuti 38 nemusi weChitatu chete
Varwere Votadza Kurapwa kuMashonaland West
Varwere vakawanda vataura neStudio 7 vati pachipatara chemuChinhoyi vanhu havasi kurapwa sezvo vana mukoti vashoma vari pabasa vanenge vachingombeya vasingashande.
South Africa Inovhara Zvakare Miganhu Yayo Yose
Mutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, vakavhara miganhu yenyika yavo kutanga nezuro, Muvhuro, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Kanzuru yeHarare Yoongorora Vanhu Chirwere cheCovid-19 Zvisina Muripo
Vakafanobata chinzvimbo chemukuru anoona nezvehutano mukanzuru yeHarare, Dr Kudzai Masunda, vaudza Studio 7 kuti ongooro idzi dziri kuitwa zvakanyanya pachipatara chekanzuru cheCovid-19 cheWilkins nezvimwe.
Veruzhinji Vokurudzirwa Kuzvidzivirira Kubva kuCovid-19 Panguva Iyo Chirwere Chapararira neNyika
Vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nevasere, kana kuti 528 vakafa nechirwere ichi nyika yose kubva pachatanga kusvika Muvhuro manheru.
Ndira 11, 2021
VanaChiremba Vokurudzira Kuvhenekwa kwePfungwa Kune Vanenge Varwara neCovid-19
Nyanzvi dzehutano dzinoti panofanirwa kutsvagwa nzira dzokuona kuti varwere veCovid 19 vaongororwe hutano hwepfungwa dzavo nokuti vazhinji vavo vari kunyanya kushushikana nekudzamisa pfungwa zvakanyanyisa pavanenge vachirwara izvo zvinozopa kuti vaite zvirwere zvepfungwa.
Maguta Madiki Akaita seKariba Ovhiringidzwa Zvakanyanya neCovid-19
Chirwere cheCovid-19 chave kuvhiringidza dunhu reMashonaland West zvichitevera kufa kwevanhu vana, vamwe makumi mashanu nemumwechete vachibatwa nechirwere ichi mudunhu diki reKariba.
Hurumende Yonzi Yakarara neZamu muMukanwa paNyaya yeKudzivirira Kupararira kweCoronavirus
Bazi rezvehutano rakazivisa neSvondo kuti huwandu hwevanhu vafa neCovid-19 hwasvika pamazana mashanu nevanomwe, kana kuti 507, zvichitevera kushaya kwevanhu makumi maviri nevana kana kuti 24 neSvondo.
Hurumende inoshorwa Kuti Haina Zvinangwa Zvingabatsira Vanhu Muna 2021
VaNgwenya vanoti nyika haiendereri mberi kana hurumende ichingoita basa rekutandanisana nekusunga vatori venhau, vemapato anokwikwidza pamwe chete nevanorwira kodzero dzevanhu, vachiti hurumende inofanira kutora vanhu semadzisahwira mukusimudzira nyika kwete kupedza nguva ichisunga vanhu.
Hurumende Inoti Vafi Vachachengeterwa Mumaguta Kana Munzvimbo Dzavashaikira
Zimbabwe Republic Police yazivisa kuti kubva nhasi, vanhu vanenge vashaya, vachangochengeterwa mumaguta mavanenge vashaikira, zvinoreva kuti hapachina zvokuenda nezvitunha ku maruwa kana munhu afira mudhorobha.